परिवार सम्झिदै आश्रमका बृद्धबृद्धा - Pradesh Today
Homeफिचरपरिवार सम्झिदै आश्रमका बृद्धबृद्धा
परिवार सम्झिदै आश्रमका बृद्धबृद्धा
तुलसीपुर, १७ असोज । जय बहादुर नेपाली चाडपर्व नजिकिदै गर्दा आफ्ना घरपरिवार र आफन्तीहरुलाई सम्झिदै बस्छन् । उनलाई आफ्ना आफन्तीहरुसँग दसैँ मनाउने ठूलो रहर छ ।
तर घरपरिवारदेखि टाढिएका आफन्तीहरु चाडपर्वको समयमा एकै ठाउँमा बसेर रमाइलो गर्दै गर्दा उनीहरु भने वृद्धाश्रममा बसिरहेका छन् । दंगीशरण गाउँपालिका गोल्काटुरी घर भई हाल तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १२ रझेनामा रहेको बृद्धाश्रममा बस्दै आएका नेपाली हरेक दसैँमा परिवार सन्तान र आफन्त सम्झने गरेको सुनाए ।
आफन्तीहरु नहुँदा चाडपर्वहरु एक्लै मनाउनु पर्ने पीडा सुनाउँछन् । ‘घरपरिवार सम्झिदा मन पिरोल्छ, उनले भने ‘घर जाने मन नभएको कहाँ हो र ? तर के गर्नु लिन आउने, सम्झिने कोहि छैनन् ।’
उमेरले ६८ वर्ष पुगेका नेपाली प्रत्येक दसैँमा सबै घर–घरमा जाँदा आफू भने घर सम्झेर बस्ने गरेको बताए । शारीरिक रुपमा समेत अस्वस्थ रहेका नेपालीलाई परिवारबाट त्यति वास्ता छैन । चाडपर्वको समयमा आश्रममा बसेर परिवार र आफ्नाहरुलाई सम्झिएर दिन बिताउने गरेको उनको भनाई छ ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ बाहुनडाँडा निवासी विष्णुमती जोगिनी पनि दसैँमा घर जाने रहर भएको सुनाइन् । तलसीपुरको वृद्धाश्रममा नै बस्दै आएकी उनी घर जान आतुर छन् । तर उनीलाई घर कस्ने लगिदिने भन्ने पिरलो पनि छ ।
छोराछोरीले दसैँमा लिन आउछु भनेर आश्वासन दिएको बताउँदै उनले दसैँमा घर जान पाईनेमा विश्वस्त छिन । ‘गएको दसैँ त आश्रममै मनाएकी हुँ, उनले भनिन् ‘यसपाली लिन आउँछु भनेको भएर खुशी भएर बसेकी छु, हेरौँ के गर्छन् ?’
उनका दुई छोरामध्ये कान्छा छोराको विहे भईसकेको छ । जेठा छोरा नेपाल आर्मीमा जागिरे छन् । तर उनी विगत डेढ वर्षदेखि तुलसीपुरको बृद्धाश्रममा बस्दै आएको सुनाइन् ।
आँखाको समस्या भएकै समयमा आफन्तीहरुले आश्रममा छोडेर गएपछि उनी अहिले तुलसीपुरकै आश्रममै बस्दै आएकी छिन् । उमेरले ६० वर्ष पुगेकी विष्णुमती सन्तान हुँदाहुँदै पनि कोहि नभएको जस्तो महसुस भएको बताइन् । उनीहरु जस्तै जिल्लाको घोराही र तुलसीपुरको आश्रममा बस्दै आएका अन्य वृद्धवृद्धाहरु पनि आफन्तीहरुलाई सम्झिदै बसेका छन् ।
चाडपर्वको समयमा आफन्तीहरुको जमघट र रमाईलो धेरै हुने भएकाले पनि परिवारबाट टाढिएका बृद्धबृद्धाहरु आफ्नो घरपरिवारलाई सम्झिएर बसिरहेका छन् भने आफन्ती आउने आश पनि उनीहरुको मरेको छैन । सबै वृद्धाहरुलाई आफ्ना सन्तानलाई दसँैमा टिका लगाएर आशीर्वाद दिने धोको छ ।